Ajjeefamuu Barataa Oromoo Yuun. Dabra Maarqos – BADHAASAA DHINSAA - independentoromia.org
Barataan Oromoo Yuunbarsitii Dabira Maarqos, Muummee Keemistirii, waggaa shanaffaa baratu, BADHAASAA DHINSAA jedhamu, Dilbata dheengaddaa Yuun. D/Maarqos irraa ka‘uun gara Oromiyaatti osoo imaluu, barii Dafinoo kaleessaa (10/02/2020) toora sa'atii 11:00‘tti, konkolaataa qabachuuf buufata konkolaataa Magaalaa Buree akka seenetti, qaamota ijaaramaniin cuubeen waraanamuun lubbuunsaa darbee jira.
Ajjeefamuu barataa Badhaasaa ilaalchisuun iyyaafannoo taasifameen, namoonni barataa Oromoo kanarratti gocha gara-jabeenyaa raawwatan, barattoota Amaaraa, kanneen Yuunbarsitii D/Maarqos irraa ka'uun, barataa kana faana-dha'anii adamsuun dhufan ta'uu, barataan Oromoo Y. D/Maarqos tokko RSWO‘tti himee jira.
Gama kaaniin, hidhaafi ajjeechaan yuunbarsitiilee impaayerattii adda addaa keessatti qaamota Mootummaan Koloneeffataan Impaayera Xoophiyaa hidhachiisee bobbaaseen, barattoota Oromoo irratti raawwatamu jabaatee itti fufuun, torban kana keessa, barattoonni Oromoo 13 Yuunbarsitii Mattuu keessaa butamuun hidhamanii jiraachuu, barataa Oromoo Yuunbarsitii Mattuu tokkorraa odeeffannee jirra.
Guutuu qophii keenya kanaa viidiyoo armaan gadiirraa caqasaa.
► Kurfii keenya kana ♪ sagalee ♪ qofaan SoundCloud irraa dhaggeeffachuu dandeessu.